(Kusukela phezulu kwesobunxele) Izikhulumi engqungqutheleni oDkt Petra Schmitter, uMnu Dhesigen Naidoo, uSolwazi Tafadzwa Mabhaudhi, uSolwazi Sylvester Mpandeli, uSolwazi Ragab Ragab, uMnu Peter Townshend, uDkt Vimbayi Chimonyo, u-Aidan Senzanje noDkt Abebe Chukalla.
Isikhungo Sase-UKZN Sibambe Iqhaza Kuzingxoxo Ngokuvikeleka Kwamanzi
I-Centre for Transformative Agricultural and Food Systems (i-CTAFS) yase-UKZN ihlangane ne-Water Research Commission (i-WRC) yaseNingizimu Afrika ukuhlela isithangami enkundleni yokuxhumana ngesihloko sokuqinisekisa ukuphepha kwamanzi ngokuphucula ukukhiqizwa kwamanzi ezolimo.
Lomcimbi odingide ngolwazi olusha nezindlela ezintsha zokukhiqiza amanzi, kukhulume kuwona Isikhulu Esiphezulu se-WRC uMnu Dhesigen Naidoo nongoti omkhulu wezokunisela e-World Bank uDkt Petra Schmitter.
Ethimbeni longoti ebelikhona bekukhona uMengameli we-International Commission on Irrigation and Drainage uSolwazi Ragab Ragab, umfundisi we-Water Productivity and Remote Sensing e-IHE Delft Institute for Water Education uDkt Abebe Chukalla, uDkt Aidan Senzanje we-Discipline of Bioresources Engineering e-UKZN, umfundi wakudala wase-UKZN uDkt Vimbayi Chimonyo we-International Maize and Wheat Improvement Center eZimbabwe nonjiniyela kwezokwakha e-WSP Africa uMnu Peter Townshend.
Emukela izikhulumi omunye wabaqondisi base-CTAFS uSolwazi Tafadzwa Mabhaudhi uthe inhloso yomcimbi bekungukuqala ingxoxo ezoletha imininingwane ngencwadi ezokhiqiza ulwazi ngokwenza ngcono izinga lokuphepha kwamanzi eNingizimu yomhlaba.
Inkulumo ka-Schmitter ibalule izisombululo ngokuphepha kwamanzi nobumqoka bemizamo nendlela eyindidiyela, yagxila ekuphuculeni ukugcinwa nokutholakala kwamanzi nokukhuthaza ukusetshenziswa kwamanzi ngendlela efanele.
‘Ukuze siphathe kangcono indlela esisebenzisa amanzi ngayo kwezolimo, kudingeka sicabange sijule ngemikhankaso yethu kepha futhi nangomkhakha wezamanzi, ezamandla nezokudla sisebenzisa uhlaka lwezindlela eziningi,’ kusho yena.
UMabhaudhi ubonge u-Schmitter ngenkulumo enohlonze ethinta konke ngokuphathwa kwamanzi ezolimo, wathi kufana nokuvula isikole ngolwazi lwencwadi lube lubheka ukwehluka okukhona.
Inkulumo ka-Naidoo ithinte izinto ezimqoka ezenzeka emhlabeni jikelele ezizoba wumkhombandlela endimeni yezamanzi neyezolimo, wagxila ekuvulekeni kwezolimo ekubeni yindlela engaqeda indlela, kutholakale ukudla nomsoco.
‘Akusiyo nje indaba yesayensi engcono, ukukhiqiza kangcono nokuphatha amanzi kangcono kepha futhi wukuthola indlela elungile yokubhekana nokungalingani emhlabeni nokukwazi ukufinyelela ekudleni’ kusho u-Naidoo.
‘Amanzi awagcini nje ngokuba yinsika yokuvuselela nokuthuthukisa umnotho kepha futhi amabhizinisi ezolimo aneqhaza ekutheni sinalo noma asinalo ikusasa eliqhakazile ekongeni imvelo. Uma sinezolimo eziyimpumelelo eminyakeni engama-20 ezayo, iphupho lokungesweli ngonyaka wezi-2050 nakanjani makhulu amathuba okuthi lifezeke.’
Izinkulumo zibe sezilandelwa yinkulumompikiswano ebilawulwa yiMenenja Enkulu e-WRC uSolwazi Sylvester Mpandeli.
‘Sidinga ukubhekana nendaba yokukhiqiza amanzi, siyihlanganise nezindlela ezintsha okukhona umnotho ojikelezayo kuzona, nendidiyela ye-WEF nezindlela zokudla ezichumayo,’ kusho uMpandeli, ebalula imisebenzi emqoka ye-WRC ekufezeni leli phupho.
Ngesikhathi senkulumompikiswano u-Ragab ukhulume ngendaba yamanzi ethinta ukuphatha ngokunswinya ukutholakala kwayo, kwathi u-Abebe wakhuluma ngesidingo sokuphucula umkhiqizo njengoba kuncipha amanzi amasha nomhlaba wezolimo. USenzanje ukhulume ngokukhiqiza amanzi, wabalula ubumqoka bokuvuleleka ukwamukela izinto ezihlukene ukuze indaba yamanzi ithele izithelo.
UChimonyo ukhulume ngokuhluka kwezithombo ukuphucula ukutholakala kwamanzi ngokucubungula indaba yokulumbanisa izithombe eziyizinhlobo ezihlukene, kwathi u-Townsend wakhuluma ngendlela elungile yokusebenzisa amanzi okunisela kusetshenziswa amathuluzi anemishini ezishintshayo.
Unjiniyela Wase-UKZN Unqobe uMklomelo i-Young Concrete Researcher Award
USuku Lwabesifazane - Wathinta Abafazi, Wathinta Imbokodo!
I-Durban International Film Festival Imemezele Abanqobi
Umfundi Wezemfundo Uzuze Lukhulu